नक्कली नोटसहित २ जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले पक्राउ गरेको छ । पूर्वी नेपालमा नक्कली नोटको कारोवारमा संलग्न विराटनगर महानगरपालिका -६ का २२ वर्षे संगित महतो र विराटनगर महानगर-७ का २१ वर्षे सुमन तोलाडीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले उनीहरुको साथबाट ५०० सयका ३ सय ४८ थान अर्थात १ लाख ७४ हजार रुपैयाँ नक्कली नोट बरामद गरेको छ । प्रहरीले आइतबार पत्रकार...
प्रचण्डले भने- अब त लाज भयो, भोलि मन्त्रिपरिषद बिस्तार हुन्छ
सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सोमबार सरकार बिस्तार हुने बताएका छन् । सरकार बिस्तारबारे आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आफूले छलफल पनि गरेको प्रचण्डले जानकारी दिए । आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले भने, ‘आज बिहान पनि उहाँलाई -प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई) भेटेर अब त...
स्थानीय तहमै मतदाताको नाम दर्ता गरिने भएपछि खुम्बु बासी उत्साहित ।
निर्वाचन अयोगले साउन १६ गते देखी ३२ गते सम्म स्थानीय तहको केन्द्रमा गएर मतदाता नामवली संकलन गर्ने भएपछि खुम्बुबासी उत्साहित बनेका छन् । प्रदेश र संघको निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगले यस अघि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गएर साउन १ गते देखी १५ गते सम्म नाम दर्ता गराउन सक्ने जनाएको थियो । विभिन्न राजनितिक दलहरुले समय थप गर्नुपर्ने र गाउँगाऊँमा गएर संकलन...
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सोलुखुम्बुमा शनिबार पनि कार्यसम्पादन,
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सोलखुम्बुले शनिबार पनि फोटो सहितको मतदाता नामावली दर्ता गर्ने काम गरेको छ । आयोगको परिपत्र अनुसार सार्वजनिक विदाको दिनमा पनि कार्यालय सन्चालन गरी फोटो खिच्ने तथा नाम दर्ता गर्ने काम गरिएको कम्प्युटर अपरेटर तथा सुचना अधिकारी जगनाथ दाहालले जानकारी दिनुभयो । तर नागरीकलाई शनिबार पनि काम हुने भन्ने जानकारी नभएकाले ४ जनाको मात्र फोटो...
सांसद लम्सालको पहलमा एम्बुलेन्स सेवा
पर्वत जिल्लाको कुश्मा नगरपालिका–१४ स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन भएको छ । पर्वत क्षेत्र नं २ का सांसद विकास लम्सालले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमार्फत रकम उपलब्ध गराएपछि एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा आएको हो । उक्त एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रिया पूरा गरिसकिएको र अब केही दिनमै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी...
नेइमारले बार्सिलोनाका खेलाडीलाई ‘बाई’ भने
बार्सिलोनाका फरवाडर नेइमारले आफू फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन जाने तयारी गरेको बताएका छन् । २५ वर्षका नेइमारले साथी खेलाडीसँग आफू पिएसजी जाने तयारी गरेको बताएको ले पारिसेनलाई उद्धृत गर्दै बेलायती पत्रिका डेलीमेलले जनाएको छ । पिएसजीले नेइमारलाई विश्व कीर्तिमानी मूल्य एक सय ९६ मिलियन पाउण्ड स्ट्रर्लिङमा अनुबन्ध गर्ने तयारी गरेको छ । फ्रान्सेली सञ्चारमाध्यमले...
लेखकलाई ६ महिनाभित्र मुस्लिम नबने हातखुट्टा काटिदिने धम्की
भारतको केरला राज्यका प्रसिद्ध मलयाली लेखक केपी रमनउन्नीलाई एउटा बेनामे धम्कीपूर्ण पत्र पुगेको छ । पठाउनेको परिचय नखुलेको पत्रमा रमनउन्नीको लेखनका कारण मुस्लिम युवक भड्किएको भन्दै ६ महिनाभित्र मुस्लिम नबने दाहिने हात र देब्रे खुट्टा काटिदिने धम्की दिइएको छ । लेखकले पत्रबाट पत्र कसले पठाएको हो भन्ने नखुलेपनि मलप्पुरम जिल्लाको मंजेरीबाट आएको हुन सक्ने आशंका गरेका छन्...
चलचित्र ‘छक्का पन्जा २’ले युटुबमा नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । यो चलचित्रको ‘नसमाउ नाडीमा’ बोलको गीतलाई युटुबमा छोटो समयमै सर्वाधिक धेरै पटक हेरिएको छ । चलचित्रको यो गीतलाई १ दिनमा करिब ९ लाख पटक हेरिएको छ । यो गीतलाई दर्शक र समिक्षकले भने मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, पनि युटुबमा भने गीतको भ्यूज आक्रामक तरिकाले बढिरहेको छ । यो गीत अहिले युटुबमा नेपाल ट्रेन्डिङको...
पश्चिम बंगाल सरकारको अघोषित नाकाबन्दीका कारण खाद्य संकट व्यहोरिरहेका दार्जीलिङबासीलाई नेपाली युवाहरुले निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण गरेका छन् । नेपाली भाषी भारतीयहरुको दुःख देखेका सीमा क्षेत्रका युवाहरुले दार्जिलिङका विभिन्न स्थानहरुमा खाद्य सामग्री वितरण गरेका छन् । पशुपतिनगर युवाहरुले स्थानीयसँग खाद्य सामग्री संकलन गरेर भारततर्फ लगेका छन् । युवाहरुले...
यति एयरलाइन्स अब ‘एटीआर’ युगमा, ल्यायो ७२ सिटे नयाँ विमान
जेटस्ट्रिम विमानमार्फत सेवा दिइरहेको यति एयरलाइन्स अब एटीआर युगमा प्रवेश गरेको छ । यतिको पहिलो एटीआर विमान शनिबार मध्यान्ह काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गरेको छ । फ्रान्सेली कम्पनी एटीआरको जहाजलाई यतिले पहिलोपटक ल्याएको हो । एटीआरमार्फत बुद्ध एयरले बजार हिस्सा बढाउँदै लगेपछि यति पनि आफ््नो बजारलाई तल झन नदिने रणनीतिका साथ एटीआर विमानहरु ल्याउने अनुमति पाएको...
कहिलेसम्म नेपाली बिरामीहरु भारतमा लुटिइरहने ?
डा. सुभाष लामिछाने गत महिनाको कुरा हो, पेट दुख्ने समस्या लिएर एक अधबैंसे महिला मेरो ओपिडीमा आइन् । हातमा एक बिटो कागजात पनि बोकेकी थिइन् । ‘हिस्ट्री’ लिँदै जाँदा थाहा भयो- केही महिनाअघि मात्रै भारतको मुम्बईमा उनको पाठेघर निकाल्ने अपरेशन भएको रहेछ । कागजातहरु त्यही अपरेशनसँग सम्बन्धित थिए। हामीकहाँ सामान्यतया हरेक बिरामीलाई लाग्छ- 'मेरो त १० वर्षअघि फलानो अपरेशन भएको...
कैलालीः वृद्धवृद्धालाई भत्तासँगै निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण
कैलालीको गौरिगंगा नगरपालिकामा बिहीबारदेखि वृद्धवृद्धाहरूका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य चेकजाँच सुरु गरिएको छ। गौरिगंगा नगरपालिकाको आयोजनामा समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणसँगै स्वास्थ्य जाँच सुरु गरिएको हो। नगरपालिकाको वडा नम्बर–६, बनबेहडाबाट सुरु भएको कार्यक्रमको गौरिगंगा नगरपालिकाका मेयर भीम देउवाले उद्घाटन गरेका थिए। ‘वृद्ध अवस्थामा विभिन्न रोगले सताउने...
छक्का पञ्जा’ले पुरा गर्यो मिसन, गीतका शब्दहरु नै भाईरल
चलचित्र ‘छक्का पञ्जा’ टिमले पहिलो गीत सार्वजनिक गरेसँगै आफ्नो वचन पुरा गरेको छ । ‘छक्का पञ्जा’ छायाँकन गरिएको ठाउँ काभ्रेपलाञ्चोक पनौति १० सलिमटारका स्थानियको सुविधाका लागि एम्बुलेन्स दिने वचन आज पुरा गरेको हो । ‘छक्का पञ्जा २’ गीत सार्वजनिक गरेसँगै दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौलाले शुक्रबार एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेका हुन् । ‘छक्का पञ्जा’ सफल भएसँगै...
दुर्घटनामा चुडिएको खुट्टा विएण्डसी अस्पतालमा जोडियो
झापाको बिर्तामोडमा रहेको बिएण्डसी हस्पिटलले छिनेको खुट्टा जोडेको छ । छिनेको खुट्टा जोडिएको यो पूर्वमै पहिलोपटक भएको अस्पतालको दाबी छ । शुक्रबार हस्पिटलमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी झण्डै एक महिनाको प्रयासपछि कनकाई नगरपालिका-३, सुरुङ्गाका गोपाल विष्टको छिनेको खुट्टा जोडिएको जानकारी दिइएको हो । एक महिनाअघि सवारी दुर्घटनामा परी विष्टको दाहिने खुट्टा चुडिएको थियो...
सीएनआईको कार्यक्रममा भवानी राणा ! मिल्लान् त महासंघ र परिसंघ ?
स्थापनाको १४ वर्ष पार गरेसँगै शुक्रबार नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्षलाई आफ्नो सार्वजनिक कार्यक्रममा स्वागत गर्दै अतिथि बनायो । सम्भवतः परिसंघका लागि महासंघका अध्यक्षलाई आफ्नो कार्यक्रममा स्वागत गर्ने यस्तो संयोग पहिलोपटक जुरेको हो । सीएनआईको स्थापना दिवशका अवसरमा भएको कार्यक्रममा उद्योग बाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा...